Fitsaram-bahoaka : hampahafantrara lalàna velona ny minisiteran’ny Fitsarana | NewsMada
Fitsaram-bahoaka : hampahafantrara lalàna velona ny minisiteran’ny Fitsarana
Inona ny vahaolana amin’ny fitsaram-bahoaka mihanaka etsy sy eroa? Milaza hampahafantatra ny lalàna velona sy ampiharina amin’ny vahoaka ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana.
“Momba ny fitsaram-bahoaka, misy mitombina ihany hoe andraikitry ny minisiteran’ny Fitsarana. Mino sy matoky izahay: tsy andraikitra manontolon’ny minisiteran’ny Fitsarana ny fitsaram-bahoaka.”
Izay ny nambaran’ny minisitry ny Fitsarana, Andriamiseza Charles, teny Anosy, omaly, tamin’ny fitokanana ny tranon’ny mpisolovava. Toy ny kolikoly ihany io: andraikitry ny rehetra ny manazava, ny mananatra, ny manao fanapariahana lalàna.
“Nanapa-kevitra izahay, ary efa manao drafitra hitety ny manerana an’i Madagasikara amin’ny fanapariahana sy fampahafantarana ny lalàna velona sy ny ampiharina. Ao anatin’izany ny Dina”, hoy izy. Hanomboka tsy ho ela izay.
Amin’ny fisian’izao tranon’ny mpisolovava izao: mora kokoa ho an’ny vahoaka ny mahafantatra izay tokony hohatoniny, raha mila mpisolovava matihanina sy ara-dalàna na mila torohevitra. Antenaina hampitsahatra ny fanambakana samihafa fanaon’ny sasany sy ireo misandoka amin’ny asa ny fisian’ny tranon’ny mpisolovava.
“Miteny kosa aho hoe aleo hatahotra fitsarana ihany ny vahoaka. Rehefa sahisahy loatra ireo, manahirana ny mifehy azy. Na ianareo mpisolovava aza mety tsy hisy asa intsony. Aleo ny vahoaka hatahotra dia manatona anareo”, hoy izy.
Tsy miova ny lalàna hatramin’izay
Anisan’ny mampitaraina ny maro amin’ny sehatra samihafa hatramin’izay ny fisian’ny lalàna lany andro maro loatra, nolovaina tamin’ny mpanjanatany. Hatramin’izay, nanaja na farafaharatsiny natahotra fitsarana sy mpitandro filaminana ny vahoaka, na hoe tsy mahalala lalàna aza.
Hahavaha olana ve ny fampahafantarana lalàna, raha ny fitondrana ankapobeny no efa tsy itokisany intsony na tsy to teny aminy? Na hoe tomponandraikitra amin’ny ataon’ny fitondram-panjakana ny rehetra… Raha tena andraikitry ny rehetra ny raharaha: mila fakan-kevitra, fifampidinihana, fanorenana ifotony… ?